Rabemanantsoa Rocquie Evelyne : Filohan’ny filan-kevim-pitantanana eto amin’ny Oniversite nitondra fampandrosoana nandritra ny 6 taona
Fankasitrahana, fisaorana no natolotry ny Oniversiten’Antananarivo ho an-dRamatoa Rabemanantsoa Rocquie Evelyne tamin’ny 17 febroary lasa teo. Feno fahombiazana tokoa ny fotoana nitondrany tety Ambohitsaina nandritra izay taona nifanesisesy izay. Maro ny asa vitany niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy nandritra izay 6 taona nitondrany izay. Ny telo taona farany fotsiny no hosinganina manokana sy atao jeri-todika kely.
Mendri-piderana tokoa ny asa vitan’ireo mpikambana anatin’ny CA na Conseil d’Administration nandritra ireo taona ireo, raha tsy hilaza hafa-tsy ny fametrahana ny vato fehizoron’ny Oniversiten’Antananarivo sampana Antsirabe Vinaninkarena sy Soavinandriana Itasy ary ny fitokanana ny foto-drafitr’asa teny an-toerana. Tao ihany koa ny fitokanana ny fotodrafitr’asa tao amin’ny Institut Confucius, ny Sticom, ny tao amin’ny Fakioliten’ ny siansa, ny trano roa fiasàn’ny mpandraharaha ao amin’ny Fiadiadian’ny oniversite ary tao ny fanohizana ny fanarahana ny kaonty. Zava-dehibe ihany koa ny fanatanterahana isan-taona ny Salon de l’Etudiant, ny fanolorana marim-pankasitrahana, ny fanatsarana hatrany ny traikefan’ny mpampianatra mpikaroka sy ireo mpandraharaha isan-tsokajiny.
Niroso ary tsy nihemotra intsony ny dia, noho izany dia betsaka ny fiofanana tselatra na maharitra, na tany ivelany na teto an-toerana, ary dia samy nahazo ny tandrifiny azy avy ny tsirairay. Tsy hadino ihany koa ny namoahana ny gazety Akon’Ambohitsaina, ny nanokafana ny Radio Université, ny fanatsarana ny serasera, ny fifandraisana amin’ny fiheverana ny “Forum électronique”, ny nanatevenana ny “cours en ligne”, ary efa ampiasaina ny fitaovana amin’izany, ny fitadiavana fiaraha-miasa eto an-toerana sy any ivelany, ny fampiharana seha-panofanana ny rafitra LMD, ny fiarahabana sy fankasitrahana ny Professeurs titulaires, Professeurs titulaires honoraires, sy ny Professeurs Emérites.
Tsy hadino ihany koa ny fitokanana ny SMS na Service Médico-social sy ny fiarahamiasa amin’ny Marie Stopes Madagascar, ary nynametrahana ny University Star. Ampahatsiahivina eto koa ny fitokanana ny kianja filalaovana tsipy kanetibe vaovao. Ary ny farany izay tsy kely indrindra, dia ny nanatanterahana ny « Salon de la recherche au service de l’économie et de l’emploi ». Izy io dia hetsika avy amin’ny fiarahamientan’ny Oniversiten’Antananarivo, ny Fivmpama ary ny Birao iraisam-pirenena momba ny Asa. Ny hevitra niantomboany dia avy amindRamatoa Filohan’ny Filan-kevim-pitantanana.
Natao io Salon io mba hampifanatonana ny tontolon’ny mpanao fikarohana sy ny mpandraharaha ara-toekarena. Ny tanjona tamin’izany moa dia ny hampiroboroboana ny famoronan’asa ho an’ny tanora rehefa misy ny fifanarahana fiaraha-miasa. Nandritra ny lahateny izay nataony tamin’ny 17 febroary teo, dia nisaotra sy nankasitraka ireo niara-niasa taminy rehetra izy. “Afa-po ny CA niara-niasa taminareo, satria sady niasa mafy ianareo no niasa tsara. Ny fahaizanao nikaroka mpiara-miombon’antoka teto an-toerana sy tany ivelany no tena nahavitantsika ny asa”.